बुद्धि बंगारा पलाउँदा किन दुख्छ? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
स्वास्थ्यखबर आईतबार, फागुन १६, २०७७, ०८:२३:००
प्रश्न : म २३ वर्षको छु। मेरो बुद्धि बंगारा आउने क्रममा छ। बुद्धि बंगारा आउन लागेकाले होला असाध्यै दुख्ने पनि गरेको छ। बुद्धि बंगारा पलाउँदा किन दुख्छ? यसको निदान के होला? - एसके
डा बिकेन श्रेष्ठको उत्तर :
उमेर बढ्दै जाँदा मानिसको दूधे दाँत झरेर नयाँ दांत पलाउँछ। तीमध्ये अन्तिममा पलाउने चपाउने दाँत अथवा बंगारालाई सामान्य भाषामा बुद्धि बङ्गारा भनिन्छ। अलि बढी उमेर भएपछि १४-२४ वर्षको भएपछि पलाउने भएकोले यस दाँतलाई बुद्धि बंगारा भनिएको हुनुपर्छ। अन्यथा यो पनि एक किसिमको चपाउने दाँत मात्र हो।
(डा श्रेष्ठ न्याम्स, वीर अस्पतालका कन्सल्ट्यान्ट ओर्थोडोन्टिक्स हुन्।)
बाजुरामा निमोनियाका बिरामी बढे २२ मिनेट पहिले